သင်ကလမ်းကြောင်းမှားမကျွေးသင့်တယ် | Apg29
ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အပြုအမူနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါမှော်ဖြစ်ပါတယ်သံသယသူတွေကို၏မှတ်ချက်များကိုဘယ်တော့မှဆက်ဆံပါ။ သူတို့ကိုငါမအစားအစာပေးပါ။
တစ်ဦး "မှော်" ကဘာလဲ?
အင်တာနက်ပေါ်တွင်တစ်ဦးက trolls သာမှတ်ချက်များအတွက်ကျိုးပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးဆွေးနွေးရန်လိုလားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောရည်ရွယ်ချက်များရှိသူတွေကိုတုံ့ပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မဘလော့ဂ်စတင်လာတဲ့အခါ Apg29 ဒီတော့အချို့သောခရစ်ယာန်များသည်ထိုအက trolls တုံ့ပြန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ခဏတစ်နောကျမှသူတို့မပေးခဲ့သညျ။ ဒါကလူတွေရဲ့အချိန် ယူ. သူတို့တက်ပေးခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်အောင်သူတို့ကိုထွက်သောအခါမှ, မှင်စာရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
trolls အချိန်သူခိုးဖြစ်တယ်, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်နှုတ်ပိတ်ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အပြုအမူနောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါမှော်ဖြစ်ပါတယ်သံသယသူတွေကို၏မှတ်ချက်များကိုဘယ်တော့မှဆက်ဆံပါ။ သူတို့ကိုငါမအစားအစာပေးပါ။
ဒါကလူတွေရဲ့အချိန် ယူ. သူတို့တက်ပေးခြင်းတက်အဆုံးသတ်နိုင်အောင်သူတို့ကိုထွက်သောအခါမှ, မှင်စာရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာရည်ရွယ်ချက် trolls ဆန့်ကျင်ငြင်းခုန်လူတစ်ဦး၏စိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘဲသဘောတူဖန်တီးသည်မဟုတ်ကြောင့် trolls အပြုအမူရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူငြင်းခုန်များသောအားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ငါဆွေးနွေးမှုပျံဝဲပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မှတ်ချက်များကိုအခြားသူများအာဟာရသင့်တယ်မပေးဘို့ထိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အခါအများအားဖြင့်ဒီလိုမှတ်ချက်တွေ deletar ။ ခြွင်းချက်ကိစ္စများတွင်အစဉ်မပြတ်ငါထဲကဘယ်နေရာမှာဟုသူကပြောသည်အခေါက်များနှင့်သင်တန်း၏လမ်းကြောင်းကြည့်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ချက်မှတဆင့်ဖြန့်ချိခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးက trolls ဥပမာ
တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောဥပမာဆောင်းပါးအချို့မှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည်ငါနှစ်သစ်ကူးအဘို့ရေးထားကြောင်း "ကိုကြည့်ပါ, ငါအသစ်ကတစ်ခုခုလုပ်နေနေပါတယ်" ။ ငါတိုက်ရိုက် deletat ပထမဦးဆုံးမှတ်ချက်ပေးရှိပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ရွေးတော်မသငျ့သညျ။ က trolls လောင်စာပေးခြင်းအခါဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ဒါကြောင့်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
မမက်ဆေ့ခ်ျကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းဒါ comments ဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်လွဲချော်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ခိုးလေ၏။ ဒါကအသုံးမကျမှတ်ချက်များ၏တွေအများကြီးအတူဆောင်းပါးများကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ဆီးဖို့, မှင်စာရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါမှတ်ချက်များကိုသင်တိုက်ရိုက် "ဟုအဆိုပါဖူးအငုံထွက်မှာ" မဆီးတားကြပါလျှင်ဘယ်လိုအရူးဤကဲ့သို့သောနိုင်ပါတယ်ပြသရန်ရပ်ကြကုန်အံ့။ သင်ကလမ်းကြောင်းမှားကိုလုပ်ကျွေးဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။
တစ်ဦးက trolls အီးမေးလ်က
ကြောင်းဆောင်းပါးအပေါ်မှတ်ချက်တွေ၏စံနမူနာကတစ်ခါတစ်ရံနိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုဥပမာတစ်ခုပေးလိမ့်မယ်: ငါခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ဟုဆိုကာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံမှအီးမေးလ်တယ်အဖြစ်မောက်မာစွာကမျြးစာကိုသူ့ရဲ့ကြီးမြတ်သိကျွမ်းခြင်း၌ထမှုတ်။ အတိအကျဒီတော့ဒီလူ wrote:
"ငါသည်နှစ်များတွင် APG29 နေသတင်းလွှာကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်။ ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားSmålandရှိလူအပေါင်းတို့သည်ပုံခရစ်ယာန်တွေကိုနတ်ဆိုးကိုဖကျြဆီးနိုင်ပါစေ။ "
ဒါဟာလုံးဝအသုံးမကျဖြစ်သကဲ့သို့သင်တန်း၏, ငါမေးလ်မဖြေခဲ့ပါဘူး။ ငါထို့နောက်ရုံ ပို. ပင် e-mail တယ်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဒါမှငါအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပြောင်းလဲဖို့စိတ်ရှိသည်ပါဘူးသူတစ်ဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ငါကဲ့သို့သောအီးမေးလ်များနှင့်မှတ်ချက်များကိုငါ့အချိန်ကိုတက်ယူမယ်လို့အစောပိုင်းငါ၏အဘလော့ဂ်အတွက်သင်ယူခဲ့တယ်။ သင်ကလမ်းကြောင်းမှားမကျွေးသင့်ပါတယ်! ယင်းက trolls နောက်ဆုံးမှာသူတို့သညျယရှေုခရစျတျောနောင်တရရန်လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်စေခြင်းငှါဒါငတ်လာသည်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ဒါကြောင့်အစား, သငျသညျအရာ၏ဤကြင်နာချန်ထားသင့်ပါတယ်!
Apg29 ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသူတို့သူ့ကိုနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ခံယူနိုင်ပါလိမ့်မည်သို့မှသာလူယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှဒီကိုရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ trolls ဒါထို့ကြောင့်သင်သည်ထိုသူတို့အစာကျွေးဘယ်တော့မှသငျ့သညျကယျတငျခွငျးသို့ရောခံရမှလူတားဆီးချင်တယ်။
မဟုတ်သလိုငါစိန်ခေါ်မှုပြဿနာများကိုရှိသည်သောလူများမှအီးမေးလ်သို့မဟုတ်မှတ်ချက် reply ကြဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့ရိုးရိုးသားသားမေးခွန်းများကိုရှိသည်ကြောင့်အဖြေကိုရှာနေပေမယ်သာမေးခွန်းထုတ်ချင်ကြသည်မဟုတ်။ သင်သာမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူလက်ျာတစျခုအရမည်, ထိုကဲ့သို့သောအီးမေးလ်များသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ပါ, ပြီးတော့အခြားပြီးတော့အခြား ... အက trolls မကျွေးပါနဲ့!
ယင်းက trolls မကျွေးပါနဲ့
သငျသညျတခုအင်တာနက်က trolls အပေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး9ဆိုင်းဘုတ်များ
onsdag 16 oktober 2019 00:18
Be för mig imorgon får jag reda på om jag har cancer Tack
Emma : Gud har skapat jorden rund
Kent: Gud har skapat jorden rund
Britt Holmgren: Jesus hämtar dem som hör honom till